W/Q:-(C/WAAXID KHALIIF) Saxaafadda: Bishaaro Bishaaro; Bisha Ramadaan oo noo Bilaneysa iyadoo Zenawi Bilaaddeenna Xukumo! | Halganka Online
W/Q:-(C/WAAXID KHALIIF) Saxaafadda: Bishaaro Bishaaro; Bisha Ramadaan oo noo Bilaneysa iyadoo Zenawi Bilaaddeenna Xukumo!
Posted on Agoosto 19, 2009 by halganka
Ilaah baa mahad leh. Nabadgelyo iyo naxariis nabi Muxamed korkiisa ha ahaato.
ALLAAHU AKBAR. Cinwaanku ma aha buunbuunin ee boggag badan oo internetka ah iyo kuwo suxufiyiin sheegta ayaa mashraxad soo dhaaftay markii Tigreega iyo Tigree-raacu qabsadeen magaalooyin dhowr ah sida Balad-Xaawo, Luuq iyo Wabxo! Waxaa dadkaasi saas u yeeleen waa markay arkeen innagoo shacabkii ah, Salafiyo-jadiid, Ictisaam iyo Suufiyo culumo noo ah, Tigree hogaamiye noo ah, Ashahaado-la-dirir madaxweyne sheegtay, iyo Beesha Caalamka oo mowle noo noqotay.
Waxaan is dhahaa ma ku duceysataa: Ilaahoow inta dabayl qaboow soo dirtid, nafta ka wada qaad Shabaabka iyo Muqaawamada saxda ah si intayada kale aan u hoosgalnno gumeysiga Maraykanka iyo Tigreega! Waagii Andalus waa la arki jiray boqorro is heysta laakiin waan arrin ugub ah in qof suxufi sheeganaya oo haddana gaal iyo cadowgiisii koowaad u khidmeynaya!
Maaddaama gaalo iyo gaalo-raacyadii dajiyeen kaarto lagu gumeysanayo Koonfurta Soomaaliya malaga yaabaa in loo baxsado Puntland iyo Somaliland? HAYHAATA! Xaggeyga WALLAAHI inaanan rajo ka qabin labadaas qeybood.
Shariifku hadda wuxuu Ina C/Rashiid ka codsaday inta la qabanayo Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka inuu maaweeliyo Puntland si aysan u oran maxaa loo soo celinayaa Barre Hiiraale iyo Indho-cadde? Sidii Gaajoow Cadde u siray odayaal ay xurguf ka dhaxaysay isagoo ku araranaya 114 qodob oo horay u dhacay. Gaajoow Cadde wuu daaliyey odayaashii iyo dhallinyaradii isagoo u saaraya baanisooyin iyo maahmaahyo. Markii dambe iyagoo gabran baa ciidankii Gaajoow Cadde weerar gaadmo ah huf uga dhigay qoladii la maaweelinayey.
Hadda Ina C/Rashiid baa Faroole kala heshiinaya wax la kala tirsanayo! Laakiin hadday u suurtogasho, waxaa hadhow qeylin doona reer Puntland iyagoo leh: maxaa Barre Hiiraale iyo Indhocadde oo kaliya loo soo dhoweystay? Dabadeedna Shariifku dhaho: Indhocadde ma aha Ictisaam oo kale oo masjid iska dhex fariista, sidoo kalana Barre Hiiraale ma aha Moorgan oo kale! Marka ciddii ii shaqeysa baa shaaha cabbaysa! Haddii xeerka duurjoogta loo eego waxaa saxsan Shariifk! Sidoo kale Ina C/Rashiid wuxuu rabaa in dadka hilmaansiiyo wixii Nuurcadde iyo Shariifku ku faleen C/hi Yuusuf. Ileyn dadku waa iska masaakiin oo waxay ku mashquulayaan “ra’iisul wasaarihii” dhammaa baa idin martiya marka Shariifku waa idin sharfay!
Riyaale laftiisu waxba kuma hayo meesha. Isaaq waxaa faan ugu filan in Axmed Godane iyo Ibraahim ka dhasheen laakiin nasiibdarro Soomaalidu ma qiimeyso nin aysan gaalo wadan! Marka nimankaasi waxay u qalmaan in la taageero.
Teeda kale Muqaawamadu maxay damacday? Ilaahay ma kala jecla dad jago doon ah. Ama Maraykan ka socdaan ama koox diineed ka socdaan. Cidna idin ka yeelimeyso iyadoo Shabaabka iyo X. Islaam heshiin la’ yihiin inaad Soomaali heshiisiin kartaan! Xaggeyga khaladka labadaas kooxood uma sinna oo qolo waxaa ka buuxa siyaasiyiin. Marka inta goori goor tahay Ilaahay uga baqa shacabkaas oo midooba; haddii kale waxaa imaaneysa in eber laga soo bilaabo marka Tigreegu waddanka qabsado. Siyaasiyiinta hadda laga kari la’ yahay naga baxa waa cari doonaan haddii Ilaah idmo hadday dhego adeygaan.
Haddaad midowdaan Ilaahay idinkiis arrinkaan bilowgiisu u eg yahay mugdiga wuxuu ku dhammaan doonaa iftiin. Waana sunada Ilaahay. Aan xasuusanno dagaalkii Khandaqa. Laakiin waa in Muqaawamadu hal hogaan leedahay. Waa doqonnimo iyadoo waxaas oo huwan ah soo socdaan in raggu jago isku qabqabsado ee marka ma caqli qaadaneynaa?
Rajo xumaa ku geleysa markaad aragtid ummad “suxufiyiinteedu” noogu bishaareyneyso qabsashada Zenawi ee Soomaaliya weliba Ramadaanka dhexdiisa! Waxaa ka sii daran shacabka waxaas lagu dhex akhrinayo oon kala jecleyn! Marka waa la yaab shacab marti ka ah waddankooda oon difaacaneyn!
Mar kale haddii Muqaawamadu mideyso cududdooda iyo cuddadooda waxaa imaanaya Nasri. Weligeed muslimiinta gaalada ugama rayn hub kaliya ee mar kasta gaaladaa tiro badnaa. Marka wixii gacanta noogu jira sida hogaanka aan xallinno si aan u helnno Nasriga Ilaahay.
WA SALALLAAHU CALAA NABIYINAA MUXAMADIN WA CALAA AALIHI WA SAXBIHI WA SALAM.
« Afhayeenka Maamulka Mujaahidiiinta Islaamiga Jubooyinka Sheekh Xasan Yacquub”Wadanka Waan ka Saareynaa Gaalo Raacyada Calankii Towxiidka ku Qornaa Gubey Gabdhaha Islaamka ahna Jalbaabka u Diidey. Mujaahidiinta Alshabaab ayaa dib ula wareegay degmada beled xaawa ee gobolka gedo »